राजसंस्था नेपालको धरोहर खम्बा हो, राजालाई अभिभावक मानेर काम गरे देशलाई फाइदा हुन्छ | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७७ असार १८ गते १०:०५
जादा जाँदै ,
४) नेपाली कंग्रेस
५) नेपाल कम्युनिष्ट
जनता बिना समाज बन्दैन समाजको संरचना नभई देश को संरचना नै हुँदैन । जहाँ देश हुँदैन, त्यहाँ राजा हुँदैन । तर, हामीले यो कदापि बिर्सनु हुँदैन कि बाइसे चौबीसै राज्य लाई बिशाल नेपाल बनाउन कम कठिन पक्कै भएन । त्यँही बाइसे चौबीसै राज्य लाई समेटेर बिशाल नेपाल देश नै शाह बंशीय राजाले बनाएका हुन । त्यसैले यहाँ राजालाई एक नम्बरमा राखेको हुँ र दुई नम्बर मा जनता लाई ।
अर्को महत्त्वपूर्ण राजा ज्ञानेन्द्रको त्यागलाई हामीले बिर्सिए पनि नेपाल को इतिहास ले कहिल्यै बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, श्रीपेच राजा कै थियो । राजाले लैजान पाउँथे । उनको पू्र्खा ले आर्जन गरेको,र मुलुक ले दिएको मुकुटको हकदार उनी नै थिए । तर जनताको ढुकढुकी बिनाको मुकुट , जनताकै नासो हो भनेर छोडेर गए ।
आज आफ्नै गल्तीले मन्त्री पद खुँस्किदा धुरुधुरु रुने बाह्रबुँदे का मन्त्रीको दाँजोमा राजगद्दी, दरबार , श्रीपेच सबै त्यागेर जंगल जानसक्ने मुटु सायद भगवान रामको अर्को उदाहरण हो, या गोरखाबाट काठमाडौ आउँदा पनि गोरखनाथ कै रहेछ र जाँदा पनि गोरखनाथले आफ्नै मुटु सापटी दिएर मात्रै जान सके । नत्र कबि कसरी कठोर हुनसक्छन ?
नेपाल र नेपाली माटो बुझ्ने लाई प्रश्न धेरै गहिरो छ १ किनकि हामी जतिसुकै गरिबी जीवन आफ्नो गाउँमा बिताएको भएपनि, आज राजधानीमा सुखसँग रमाए पनि आफ्नो जन्मभुमिलाई कदापि आफ्नो मन मुटु बाट अलग गर्न सक्दैनौं । राजाको त्याग न (२०४७) अस्तिको अधिकार खोसिदाको बिर्सन मिल्छ, न हिजो (२०६५) दरबार छोड्दा को । राजा जनतालाई हिजो पनि जनार्दन भन्थे आज पनि जनार्दन नै भन्छन् । आखिरी स्वार्थी नेपालीले बिर्सेर पनि निस्वार्थ पशुपति नाथ अनि बुद्ध र नेपालको माटोले बिर्सिएन । त्यसैले राजसंस्था नेपाल को धर्म खम्बा थियो, हो, रहेछ, रहनेछ ।
हिजो गूठी ध्वस्त पार्न सकेको भए युरोपियन युनियन ले नेपाल सरकारलाई ,नेपाली सेनाको डमरू र त्रिशूल अंकित झण्डा हटाउन अनुदानको नाममा डलर संगै दबाब पनि दिन्थ्यो । जसरी नेपाल को मुटु, नारायणहिटी निष्क्रिय भयो त्यसैगरी मुटु संगैको कलेजो यानकि काठमाडौंका रैथाने नेवारी संस्कृति लगायत करिब करिब हिन्दु र बुद्ध धर्म संगै तीन खम्बा एक्कै पटक ढालिन्थ्यो । त्यसपछि सेनाले पनि प्रधानमन्त्री मातहत आउन बाध्यता सृजना हुन्थ्यो । जहाँ औपचारिक रूपमा बैदिक सनातन धार्मिक मान्यता अनुसरण गरेर भद्रकाली पुजा नेपाली सेनाले गर्थ्यो त्यो बिधि बिधान र शास्त्र त पुजा कोठामा बन्द हुन्थ्यो शिव रात्रि को दिन सेना दिवस मनाउन को लागी पनि एकदुई पटक अनुमति अनि खारेजी मा पर्ने हो । किस्ताबन्दीमा यसैगरी धर्म संस्कृति सम्पदा मासिएपछि नेपालमा के बाँकी रहन्छ । नेपालको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बाच्छ अनि धार्मिक या अन्य पर्यटन बढ्छ ?
अनि त सेनालाई ठेक्का पट्टामा धकेलेर कमिसन ,(भुलचुक लिनेदिने) लोभमा फसाएर चंगुलमा पारेर , बिबादास्पद बनाएर अनेक हत्कन्डा अपनाइरहेछन र भन्छन् सेनालाई बसिबसी किन हामीले पाल्नुपर्ने ?
तर बुझ्नुपर्ने जरुरी यो हो कि विश्व को कुन विकसित देशमा सेनालाई दिनभर काम लगाएर , थकाएर कमजोर बनाएर राखेको छ ? सेनापती सुत्छन त उपसेनानी जागा हुन्छन् । तब न सेना चौबीसै घन्टा ताजा हुन्छन् र पो जनता संधै सुरक्षित हुन्छन् । पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन् आफ्नो उपदेश मा सेनालाई संधै तिखारेर राख्नुपर्छ । यही नै सहि हो ।
नेपालमा त पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष हुन्छन् । अर्कोले म सुतेको बेला मेरो प्यानल कोलाई खोसेर लैजाला भनेर चौबीसै घन्टा जागा तर न खानेकुराको ठेगान न सुत्ने बेलाको ठेगान । अनी हनुमानहरु भन्छन् हाम्रा अध्यक्ष देशको चिन्तामा चौबीसै घन्टा जागा । बिडम्बना यसरी जागेको भए खोइ त निर्मला पन्तको हत्यारा ?
नाम लिन छदैछ सहिदको ,
एकै मिनेट मौन धारण सहितको
जब भाषण मै झर्‍यो पसिना ,
दाम तिर्छन् जनता कर सहितको,
आजको एक्काइसौं सताब्दिमा अनुशासित स्वतन्त्रता बिना समाज अघि बढ्न सक्दैन १जुन प्राय सबै विकसित मुलुक ले अंगिकार गरेको छ १नेपाली कंग्रेस नै किन भने २००७ सालको प्रजातन्त्र मा पनि उसको भुमिका थियो । भारतीय सद्भाव को लागी पनि यो पटकपटक साबित भइसकेको छ (२००७ साल अगाडी आन्तरिक अत्याचार राणाहरु ले गरेर पनि बाहिरी कुटनैतिक भने सवल थियो । त्यसलाई आफ्नो मातहतमा लिन प्रजातान्त्रिक राजा त्रिभुवन लाई धेरै कठिन भएको थियो । त्यसैले त्यतिबेला कंग्रेसले पनि आफ्नो बिधानलाई जनता अनुकुल, छिमेकी देश, समाज वाद र प्रजातान्त्रिक आचरण अनुकुल र संबैधानिक राजतन्त्र बाट कहिल्यै बाहिर नजाने प्रणमा थियो । उसको बिधाननै सुन्दर, स्वतन्त्र , नेपालकै कल्पनासंग जोडिएको थियो ।
उता भारत लाई पनि आफ्नो पछि सम्मको सजिलो को लागि सहयोगी चाहिएको महसुस गर्दै भारत को तत्कालीन राजनीतिक घराना (नेहरु गान्धी) परिवार को स्वार्थलाई लिएर स्वीकार गरेको थियो । त्यहीँ कारण हो कि बिधान छोडेर बेथिति अंगाल्ने नेता हावी हुँदा पनि सत्र सालमा बाध्य भएर राजा महेन्द्रले पावन्दी लगाउदा पनि, ३६ सालमा व्युँतियो ४६ सालमा फेरि बलियो भयो नै । भारतसँग परनिर्भर हुन्जेल र समयानुकूल आफ्नो छिमेकी कुटनैतिक र आन्तरिक स्वतन्त्रता को लागी पनि कंग्रेस लाई जिउँदो राख्नुनैपर्छ ।
तर यसबाट जुलिया चाङ मार्कालाई बिदा गर्नुपर्ने तितो सत्य भने छर्लङ्ग छ । किनकि सातसालको इतिहास बोकेको गौरवमय पार्टी ५२ साले माओवादीसँग पोइल जाने बुद्धि जसले दिएपनी लिने त या हुने नहुने निर्णय अधिकार त अध्यक्ष, सभापति लाई नै त हुन्छ । अर्को उदाहरण बुझौं राजिब गान्धी लाई एउटा इटालियन पिजा मन पर्नाले आज हेरौं भारतिय राजनीतिक घरानालाई कति घाटा लागेको छ ? आजको विश्व परिवर्तन लाई अंगिकार गर्नसक्ने शशांक कोइराला, शेखर कोइरालालाई पार्टीको बागडोर सम्हाल्न दिएर बिधानलाई बिउँझाउनु पर्छ । अनि कंग्रेस सक्षम हो । उसले बोल्ने जय नेपालमा बिश्वास गर्न सकिन्छ ।
आजको नेपाल कम्युनिष्ट लाई पनि बेथिति को पर्यायबाची सम्झेर नेताको रबैया बोलिबचन आफ्नै कार्यकर्ता लाई तुच्छ नाम राख्ने (अरिंगाल) को माउ सम्झेर मात्रै रीस पोख्नु उचित हुँदैन । किनकि हामीलाई चिनको बिकास को खाका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ,जत्तिको भारतिय पेट्रोल, ग्यास ,लगायत । आज कोरियन कम्युनिष्टसँग को अनावश्यक साँठ गाँठ धेरै भएर मात्रै बिग्रेको होस्( डोनाल ट्रम्प बार्ता गराउने भन्ने खुस्केटका संगत मा लाग्ने बाहेक ,अरु राम्रा मानिस पनि बाध्य भएर त्यही टिकिरहेका छन् । र बिज्ञ ले बुद्धिजीवी चिन्छ नै । फेरि साथी फेर्न सकिन्छ तर, सँधियाररछिमेकी फेर्न सकिन्न भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सत्र सालको केसरजङ रायमाझी हुन वा मनमोहन अधिकारीको नौ महिने अल्पमतको सरकारले अंगिकार गरेको जनतालाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रम आफ्नो गाउँ आफैं बनाउ जनता लाई यसले केहि छाप त छोडेकै हो । यिनलाई पाखा लगाउनु पनि किमार्थ हुँदैन । चिनको सिद्धान्तनिष्ठ कम्निस्ट लाई जिउँदो राख्न सके बुद्ध का अनुयायी बढ्नेछन । नत्र कोरियन कच्चा इसाई कम्युनिष्ट भित्रभित्रै सुरुङमार्ग खनेर बस्ने खतरा बढ्छ । माक्सका आदर्श पढेर अल्पज्ञान् भयंकर को भोक मेटाउन खोज्ने सानातिना पार्टीलाई मिसाउन, पिसाउन पनि सजिलोसँग सकिन्छ । त्यसको लाभ सबैतिर राम्रै पर्छ । किनकि हिन्दुत्व संस्कारको अभिभावकत्वमा चीनको बुद्धमार्गीय दर्शन बढ्दा नेपाललाई कहिल्यै घाटा हुँदैन । शान्ति र अहिंसा परमोधर्मको पहिलो नामनै बुद्ध हो ।
यही बुद्ध को नाम र आचरण तपस्या र बुद्ध को जन्मस्थल लुम्बिनी लाई बलियो आधार बनाएर नै शान्ति क्षेत्र नेपालको प्रस्तावमा विश्वका अधिकांश मुलुकले बिरेन्द्र राजाको सफल भएको होईन र ? त्यसैको आडमा सार्कको संस्थापक र हिरो नेपाल थियो होईन र ? बिडम्बना हामीले बिरेन्द्र सरकारलाई गुमाउनु पर्यो ।
कंग्रेस या कम्युनिष्टको बिधान गलत होईन । बिधानलाई संबिधान र कानुन जत्तिकै बलियो ठान्नु पर्ने पार्टी भन्दा माथी बलियो शासकीय स्वरुप भएको मियो को अभाव भएर हो । देशको माटोलाई लत्याएर डलरलाई महत्त्व दिएर चलेको हुनाले दुबैले बिदेशीको चंगुलमा फस्नुपरेको हो ।
यदि यी दुई पार्टीले राजसंस्था लाई आफ्नो अभिभावक मानेर देश बनाउने प्रण गरे भने, बाँकी पार्टी हरु यिनमै बिलाउनु पर्ने बाध्यता जनता ले बनाइदिने छन् । आखिर सर्बेसर्वा जनता जनार्दन नै हो । यो परिस्थितिको सृजना गर्न सकिएमा पक्ष विपक्ष को लडाइँ जनताको अधिकार को लागी हुनसक्छ ।
सानो देशमा दुई पार्टी बिशाल नेपाल बनाउने अभिभावक को अनुशासनमा । उत्तर दक्षिण दुबैको सद्भाव । छिमेकी हाम्रा पक्षमा भए भने अमेरिकी वा युरोपियन युनियन को गिद्दे दृष्टि विश्वकै बलियो चीन नीतिलाई नाघेर उत्तर बाट नेपाल आउन पनि सक्दैन । विश्वकै चतुर्‍याइँमा पहिलो मोदीको महाभारतको सिमाना नाघेर पनि दक्षिण बाट आउन सक्दैन ।